Shumacyada soy qurxinta chakra carafta leh kareemada warshada keydka iyo soo saarayaasha | Winby
Shumacyada qurxinta leh ee udgoon leh sool leh kristantar keyd ah
Tayada Sare ee Shumaca Soy ee Tayada Dabiiciga ah waxay ka kooban tahay 200 garaam oo ah 100% wax sooran soy dabiici ah oo tayo sare leh, bogsashada dhagaxa 'chakra crystal', saliid muhiim ah oo saafi ah, caleen xikmad leh, 100% laambadda laambadda suufka ah, oo gubanaysa ilaa 40hours. Waxay ku siin kartaa jawi nasasho iyo raaxo leh.
Shumacyada Crystal waxay bixiyaan nadiifin weyn iyo yareynta culeyska fekerka, ha ku dejiso.
Waxaan haynaa dhalooyinkan shumaca dhalada ah, haddii aad u baahato shumacan, si dhakhso leh ayaan u rarikarin karnaa, sidaa darteed waxaad alaabadaada ku heli kartaa waqti yar.
Cabir: D8.6cm * H10.3cm
Shumacyada udugga ah ee Soy Wax udugga udgoon ee weelka dhalada ee hufan
Kaliya maahan inay kufiican tahay nadiifinta gurigaaga iyo bixinta hawo nadiif ah, laakiin sidoo kale hadiyadaha arooska, xafladaha, cashada iyo hadiyadaha kirismaska, qurxinta kirismaska. Sidoo kale ku habboon yoga iyo udugga.
Fiiro gaar ah: Weligaa ha uga tagin shumaca gubanaya isagoo aan ilaalin. Ka fogee meel aysan gaari karin carruurta iyo xayawaanku. Shumaca ha ku gubin ama ha u dhaweyn walxaha dabku qabsan karo. Waxaa lagu dhejin karaa oo kaliya dusha u adkeysiga kuleylka, dabka u adkeysanaya dabka. Iska ilaali inaad isticmaasho dusha qabow sida muraayadda ama marmarka.
Udgoon iyo xirxirid dhammaantood waa la beddeli karaa !!!
Adeeg tusaale ah ayaa la bixin karaa.
Soy Wax + shumaca dhalaalaya ee qabow + Cufka suufka ah + Daboolka Bamboo
Custom sida macaamiisha 'looga baahan yahay
Laga soo bilaabo CPL & Symrise. 2%, 3%, 5%, 10% waa la dooran karaa
Qurxinta guriga, yoga, ciidaha, hudheel, aroos, xaflad, spa iyo duugis.
Bixinta degdega ah / Custom / ODM OEM / muunad
3000pcs. Amarada yar yar waa la aqbali karaa hadii aan leenahay keyd.
Hore: Shumacyo Hadiyado ah oo Hadiyad udgoon la qaadan karo oo leh wax soy dabiici ah
Xiga: Qurxinta Guriga ee Qurxinta Dabiiciga ah ee Soy Wax Cube ah oo dhalaalaya tarts
Wick-yada hemp-ka dabiiciga ah ee lagu dahaadhay shinnida
Shumaca qurxinta ee astaanta gaarka ah
Shumac weel shumac farshaxan qurxin leh